သူ႔ေက်ာက ခ်န္ပီယံလိဂ္ေအာင္ပြဲခံတက္တူးကို ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ျပသလိုက္တဲ့ဖာမီႏို
July 27, 2019 Zayar Phyo Han Premier League 0
လီဗာပူးတိုက္စစ္မႈးဖာမီႏိုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လကရရွိခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ေအာင္ပြဲအေပၚမွာ သာယာယစ္မူးေနဆဲပါပဲ။ လီဗာပူးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပြဲမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ဘက္စပါးကို ၂-၀ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဗိုလ္စြဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဖာမီႏိုအတြက္ကေတာ့ သူ႔ကစားသမားဘ၀မွာ ပထမဆုံးခ်န္ပီယံလိဂ္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ႔ဘ၀အတြက္ အၿမဲတမ္းအမွတ္ရစရာအျဖစ္လည္း က်န္ရစ္ခဲ့တာပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္း ဖာမီႏိုဟာ သူခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလားကိုင္ေျမွာက္ေနတဲ့ပုံကို ေက်ာဘက္မွာ တက္တူထိုးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ဇာတိဘရာဇီးမွာ အပန္းေျဖအနားယူေနတဲ့ဖာမီႏိုဟာ သူ႔ေက်ာက ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားကိုင္ေျမွာက္ေနတဲ့ပုံတက္တူးကို ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Instagram ေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ျပသခဲ့တာလို႔ ဆုိရင္လညး္ မမွားပါဘူး။
အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ဖာမီႏိုဟာ မၾကာေသးခင္ကလည္း ကိုပါအေမရိကၿပိဳင္ပြဲမွာ ဘရာဇီးအသင္းဗုိလ္စြဲေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကလပ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားရခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုပါအေမရိကဖလားကိုင္ေျမွာက္ႏိုင္ခဲ့လို႔ ဖာမီႏိုရဲ႕ကစားသမားဘ၀ အေကာင္းဆုံးႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္း ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သူဟာ လာမယ့္ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔ေရာက္မွ လီဗာပူးအသင္းနဲ႔ သြားေရာက္ပူးေပါင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုးဖာမီနိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရရှိခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အောင်ပွဲအပေါ်မှာ သာယာယစ်မူးနေဆဲပါပဲ။ လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ဘက်စပါးကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ၆ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖာမီနိုအတွက်ကတော့ သူ့ကစားသမားဘဝမှာ ပထမဆုံးချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ့ဘဝအတွက် အမြဲတမ်းအမှတ်ရစရာအဖြစ်လည်း ကျန်ရစ်ခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ဖာမီနိုဟာ သူချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကိုင်မြှောက်နေတဲ့ပုံကို ကျောဘက်မှာ တက်တူထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ဇာတိဘရာဇီးမှာ အပန်းဖြေအနားယူနေတဲ့ဖာမီနိုဟာ သူ့ကျောက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုင်မြှောက်နေတဲ့ပုံတက်တူးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram ပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြသခဲ့တာလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဖာမီနိုဟာ မကြာသေးခင်ကလည်း ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာ ဘရာဇီးအသင်းဗိုလ်စွဲအောင် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကလပ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရခဲ့ပြီး နိုင်ငံနဲ့ ကိုပါအမေရိကဖလားကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့လို့ ဖာမီနိုရဲ့ကစားသမားဘ၀ အကောင်းဆုံးနှစ်တစ်နှစ်လည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ လာမယ့်ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့ရောက်မှ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ သွားရောက်ပူးပေါင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူႏိုက္တက္နဲ႔ လူကာကူကို သီးျခားစီျဖစ္ဖို႔ ေနာက္ဆုံးလက္နက္အျဖစ္ ဒီဘားလားကို ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ထုတ္သုံးဖြယ္ရွိ
နိုင်ပွဲ၊ သွင်းဂိုး၊ ပွဲရလဒ်တွေတူညီနေပေမယ့် လီဗာပူးလ်ရဲ့အထက်မှာ ဘာလို့ ချယ်လ်ဆီး ရပ်တည်နေတာလဲ? September 20, 2021
ပရီးမီးယားလိဂ်(၂)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာပဲ ဆန်းချက်ဇ်၊ ဒီမာရီယာတို့ရဲ့ဂိုးအရေအတွက်နဲ့ တူညီသွားတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို September 20, 2021
နည်းပြဘဝပွဲ(၁၀၀၀)ပြည့်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ရှုံးပွဲစတွေ့ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို September 20, 2021
နိုင်ပွဲ၊ သွင်းဂိုး၊ ပွဲရလဒ်တွေတူညီနေပေမယ့် လီဗာပူးလ်ရဲ့အထက်မှာ ဘာလို့ ချယ်လ်ဆီး ရပ်တည်နေတာလဲ?
ပရီးမီးယားလိဂ်(၂)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာပဲ ဆန်းချက်ဇ်၊ ဒီမာရီယာတို့ရဲ့ဂိုးအရေအတွက်နဲ့ တူညီသွားတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို
နည်းပြဘဝပွဲ(၁၀၀၀)ပြည့်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ရှုံးပွဲစတွေ့ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို